Woven Edge ဖဲထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း | တရုတ်ယက် Edge ဖဲစက်ရုံ
အပူလွှဲပြောင်း Edge ဖဲရက်
စောင့်ရှောက်မှုတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်အပူလွှဲပြောင်းရက်ယွန်းဖဲ 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Smooth Edge နှစ်ဖက်ဘေးယက်သည့် Edge Satin
Care Label ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် Smooth Edge နှစ်ဖက်လုံးယိုစီးထားသောဖဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Colours Edge Satin ၁ သည် Care Label Printing အတွက်ဖြစ်သည်။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
Care Label Printing ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Edge Satin ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
စောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပုံနှိပ်သည်လူပျိုဘေးထွက်ယို Edge ဖဲ 1. ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။
နှစ်ဆယက် Edge Polyester ဖဲ
Care Label ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်နှစ်ဖက်ဘေးယက်ထားသော Edge Polyester ဖဲ ၁ ။ 2. သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်း - Letter Press၊ Rotary, Silk Screen, Offset, Thermal Transfer ။ 3. OEKO လက်မှတ်။ 4. GRS လက်မှတ်။